Talyaaniga Oo Mar Kale Isku Dayaya Inuu Dhiso Ciidammada Soomaaliya | Himilo Media Group
Talyaaniga Oo Mar Kale Isku Dayaya Inuu Dhiso Ciidammada Soomaaliya
Muqdisho, 09 Apr, 2019 (Himilo)-Wefdi ka socda Talyaaniga oo ay hoggaaminaysay Wasiirka difaaca, Elisabetta Trenta oo uu qayb ka ahaa Taliyaha ciidanka xoogga dalka Talyaaniga, Gen. Enzo vecciarelli, iyo xubno kale ayaa soo gaadhay Muqdisho.
Weftigan ayaa waxay shalay kulan la qaateen Wasiirka difaaca xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Maxamed (Amar-Dambe), wasiiru dowlaha xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo xubno kale oo ka tirsan Dowladda.
Kulanka ayaa la sheegay in lagaga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xidhiidhka ka dhaxeeya labada dawladood, iyo iskaashi laga sameeyo dhinaca ciidammada iyo wada shaqeynta labada Wasaaradood ee difaaca.
Haddaba, Masuuliyiinta dalkaasi Soomaaliya ee kulankaasi ka qaybgalay ayaa waxay yidhaahdeen, “Waxaanu ka wada hadalnay xidhiidhka gaar ahaaneed ee naga dhaxeeya Wasaaradda Gaashaandhigga ee dalka Talyaaniga iyo Wasaaradeena, wuxuu ahaa kulan aad u qiimo badan oo aan runtii uga wada hadalnay sidii aan isaga kaashan laheyn Arrimaha Ciidanka iyo sidii wada shaqeyn dhow aan u yeelan laheyn, waxey aheyd booqasho aad iyo aad u qiimo badan”. Ayuu yidhi Wasiirka difaaca XFS.
Dowladaha Soomaaliya iyo Talyaaniga ayaa leh xidhiidh soo jireen ah oo qoto dheer, iyada oo ay dawladda Talyaanigu ay qayb ka tahay dawladaha Soomaaliya ka taageera amniga iyo hormarinta ciidammada qaranka.